Eoropa Andrefana · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Janoary, 2011
Video: Ireo mpanao kiraro erantany
Amerika Latina 25 Janoary 2011
Ireo horonantsary androany dia mifantoka amin'ireo mpanao asa tanana maneran'tany mbola manao kiraro amin'ny tanana. Avy any Mexika hatrany Japana: handinika ny fomba fanamboarana ireo kiraro, kiraro iva sy kapa.
Frantsa 24 Janoary 2011
Anio, 15 Janoary, no manamarika ny "iray andro taoriana"sy ny andro voalohany naha-afaka an'i Tonizia tamin'i Ben Alia. Na eo aza ny ahiahiny momba ny herisetra tsy miato any Tonizia, ny havany ary ny hoavy, nampanantena tena ireo Toniziana 600 000 any Frantsa faindray andro any dia hifaly, hankalaza ary hizara fihetseham-po mahafinaritra iraisana. Ireto misy sary vitsivitsy avy amin'ny fampisehoana fireharehana Toniziana tany Parisy.
Gresy 18 Janoary 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 06 Janoary 2011